Fifidianana tany Rosia: averina ny fanisam-bato amina faritra maro | NewsMada
Manomboka mampiseho ny tsy fankatoavana ny fitondran’i Vladimir Poutine ny vahoaka rosianina, raha ny fifidinana natao ny 8 septambra teo. Fifidianana tany anivon’ny kaominina sy ny faritra, fa misy akony lehibe eo anivon’ny fitondrana foibe. Amina renivohitry ny distrika 45, 20 amin’ireo tsy azon’ny kandidà tohanan’ny fitondrana foibe. Saika lasan’ny kandida komonista ny fandresena, ankoatra ireo antoko « madinidika » somary « andeferan’i Kremlin » ihany, araka ny fanadihadian’ny mpahay politika any an-toerana.
Hita misongadina koa ny tsy fahazotoan’ny olom-pirenena tonga nifidy, 21,77 % monja. Ao ireo kandida mpanohitra tsy nekena ny filatsahany, angamba tsy nampazoto ny maro nandeha nifidy. Nisy ihany tamin’ireo kandida tsy nahazo nirotsaka ireo niantso ny olom-pirenena handeha hifidy am-pahendrena.
Nandefa fitoriana ny kandida antoko komonista mpanohitra tany Saint Pétersbourg, nilaza ny fisian’ny hosoka teo amin’ny fifidianana. Nolavin’ny fitondrana foibe izany, ny 13 septambra. Na izany aza, nisy any amin’ny faritra maro ny famerenana fanisam-bato, tao anatin’ny dimy andro taorian’ny fifidianana. Nilaza moa ny mpitondra tenin’i Vladimir Poutine tamin’ny mpanao gazety fa “tsy misy tokony mampiahiahy ny fifidianana tany Saint Pétersbourg. Izay mety tsy fetezan-javatra madinika, ao ny komitin’ny fifidianana misahana izany”
Namaly ny mpanohitra nilaza fa « ireo eo amin’ny fitondrana ihany manoratra ny valim-pifidianana na ny PV, ary tsy mifikitra eo amin’ny fitondrana izy ireo », hoy i Andreï Pivovarov, avy amin’ny antoko Demokraty mitambatra, miray lalana amin’ireo mahaleotena. Mbola ny famerenana fanisam-bato hatramin’izao any amin’ny faritra maro.